Iyo De-RISC chirongwa chinotendeuka gore rimwe chete: Makorokoto! | Linux Vakapindwa muropa
De-RISC Chirongwa Icho chirongwa chiri pasi pechirongwa cheHorizon2020 (EIC-FTI 869945. Chirongwa ichi chakakura kwazvo maererano nekutsvagisa muEuropean Union, ine bhajeti ingangoita € 80.000M. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekusimbisa kukwikwidzana kwepasi rose kweEurope.
Asi kuti izvo zvive zvinobvira, akawanda akakosha zvidimbu anoumba iyo pikicha. H2020. Imwe yacho ndeye De-RISC (Inotendeseka Yechokwadi-yenguva Zvivakwa zveKachengeteka-yakakosha Komputa), uye chinangwa chayo hachisi chimwe kunze kwekugadzira yakagadzirira chikuva pamusika weaerospace zvichibva paISA RISC-V...
Iye zvino De-RISC inouya ku gore ravo rekutanga. Gore rinonakidza rehupenyu mavanga vachiita kupinda mumunda weMade muEuropean tekinoroji. Kuratidzira kuzvipira kukuru kune chikamu chevamwe vayo vese kuti vape mhedzisiro yakanaka uye kufambira mberi kwakakosha.
Un chinzvimbo chirongwa iyo ichavimbisa mukana weEuropean tekinoroji mune zvakakomba kunyorera, senge nzvimbo yemuchadenga. Iyo ISA iri kusimuka munguva pfupi yapfuura, kunyanya nekuda kwezvakanaka zvinopihwa neyakavhurika (uye isina huranda) rezinesi uye zvakare nekuda kweiyo modular zvazviri, ichibvumidza kushandiswa kwemawedzero enzvimbo chaidzo dzekushandisa.
Pakati pegore rekutanga rebasa rakasimba, chirongwa cheDe-RISC chakakwanisa kuona izvo zvinotsanangurwa hunyanzvi hwayo: software yekuvaka, SoC (System-on-Chip) zvivakwa uye zvimwe zvese zvepuratifomu. Nhanho yekutanga yekutanga zvizere nemabasa ehunyanzvi epurojekiti umo kufambira mberi kwakawanda kwakaitwa mumwedzi yapfuura.
Mukati merutivi rwe Hardware, vatove nekukwanisa kugadzira vhezheni yekutanga yeDe-RISC MPSoC chikuva uye iyo Monitoring Unit, inosanganisa kugona kuona (Cycle Contention Stack, Kumbira Nguva Counter), uye kudzora (Maximum-Connection Control Unit).
Kubva kudivi re Software kufambira mberi kwakakosha kunoonekwawo, senge yekutanga hypervisor prototype port XtratuM XNG y lithOS, iyo paravirtualized muyenzi inoshanda sisitimu iyo inomhanya pane iyo NOEL-V processor.
Iyo yekusimbisa zviitiko yepuratifomu, iyo ichapa humbowo hunodiwa kutanga kuitengesa.
Uye zvakare, De-RISC yakave ne kushanduka kunoshamisa, inowedzera kuwana mukurumbira mumusika uye senhengo ye RISC-V Nyika dzese, pamwe chete HIPEAC. Iyo Consortium yatorawo chikamu muzviitiko zvakaita seRISC-V Global Foramu, HiPEAC Musangano, uye DSN.
De-RISC haimire. Kana vafamba gore hazvisi kumira. Mumwedzi iri kuuya, chirongwa ichi chichaenderera mberi nehunyanzvi hwekugadzira uye basa rese rasara kuitwa, senge kuzadzikiswa kuzere kwehunyanzvi, mabasa epamberi pekutangisa, akagovana ruzivo rwezvinhu zvekushandisa kudzikisira kupindira kwepakati nemamwe matambudziko.
Software mabasa achaendererawo, kusanganisira iyo RTEMS kutama, yakavhurwa sosi chaiyo-nguva inoshanda sisitimu, seyevisitiri inoshanda sisitimu pamusoro peiyo XtratuM XNG hypervisor. Software ekuvandudza maturusi achagadziridzwa zvakare kutsigira XNG uye LithOS pane iyo NOEL-V chip.
Zviripachena, iro ramangwana tarisiro yeDe-RISC iri kuvimbisa. Isu tese tine moyo murefu kuona iyo kutanga kunoguma muna 2022, zuva rakatarwa mumugwagwa kuti uve nepuratifomu yakazara (HW / SW) yenzvimbo uye musika weaeronautical wapera ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo De-RISC chirongwa chinotendeuka gore rimwe chete: Makorokoto!